Bafake umasipala enkantolo abafuna ugesi wamahhala | News24
Bafake umasipala enkantolo abafuna ugesi wamahhala
PHOTO:nokuthula khanyile Abhikishe ngaphandle kwenkantolo amalunga e-Electricity Action Group afuna ukuhlinzekwa ngogesi wamahhala.
BAFAKELE umasipala woMsunduzi icala enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu abangamalunga enhlangano yomphakathi i-Electricity Action Group (EAG) akade befuna ukuhlinzekwa ngogesi oyisibonelelo wamahhala.
Lamalunga alenhlangano abebhikisha ngaphandle kwenkantolo ephethe izinqwembe ezikhala ngokubiza kwamanani kagesi. I-EAG inhlangano yomama abantulayo abavela emiphakathini eyahlukene eMgungundlovu okubalwa iSnathing, Honeyville kanye nase Crossini. Ngokusho kokhulumela lenhlangano uBonginkosi Sibisi uthe umasipala ngokusebenzisana nabenkampani ephakela ugesi kuleli u-Eskom, bahlulekile ukunikezela ngesinye sezidingo ngqangi.
“Ngonyaka ka 2013 uhulumeni kazwelonke wathula inqubomgomo kagesi wesibonelelo wamahhala, lenqubomgomo yayilethelwe ukusiza imindeni entulayo ukuba ikwazi ukukhona ukukhokhela ugesi.” USibisi uthe okuxakayo ukuthi umasipala woMsunduzi awuyilandeli lenqubomgomo yize ngonyaka ka 2014/15 uthole imali elinganiselwa ku R373 million.
“Lena imali yokukhokhela izinsizakusebenza zamahhala eziyisibonelelo. Iyona mali ekufanele engabe ikhokhela ugesi walabo abantulayo,” kusho uSibisi.
USibisi uthe kulemali umasipala usebenzise kuphela imali ewu R1 776 902 nokungacaci ukuthi enye ishonephi njengoba kusenemizi engu 68 000 ehlala abantu abantulayo edinga kakhulu ugesi. Iningi lalemindeni engatholi ukuhlinzekwa ngogesi icwile ezikweletini futhi iphoqeleka ukuba isebenzise izindlela ezingaphephile ukupheka kanye nokukhanyisa amalambu kanye nokuzigcina befudumela ikakhulukazi njengoba kusebusika.
“Njengenhlangano sikholelwa ukuthi wonke umuntu kufanele athole izinsiza, akekho umuntu ekumele anqatshelwe zona ngoba engakwazi ukuzikhokhela. Akufanele umasipala ubeke imali phambili bese ukhohlwa abantu,” kusho uSibisi. Omunye walabo akade bebhikisha ngaphandle kwenkantolo uthe iningi labo liphila ngemali yempesheni, “Njengoba siziphilisa ngesibonelelo sikahulumeni sigade nabazukulu, imali yethu ayeneli ukuthi singaphinde sikwazi ukukhokhela ugesi njengoba umba eqolo.”
Umasipala woMsunduzi ugcine wenze isivumelwano nalenhlangano ngaphandle kwenkantolo sokuthi kuyothi kushaya umhlaka 30 ku Okthoba nonyaka labo abafelwe izigubhu zikagesi ziyobe sezilungisiwe kanjalo nalabo abangenawo ugesi bayobe sebefakeliwe.
UMandla Gcwabaza naye ongaphansi kwalenhlangano uthe sibajabulise kakhulu isinqumo esithathwe umasipala woMsunduzi,
“Ngeviki elizayo kuzoqala uhlelo lokubhaliswa kwalabo abangenawo ugesi kanye nalabo abafelwe izigubhu. Sijabule kakhulu ngesinqumo yize sinemibuzo yokuthi kungani kuze kwadingeka ukuthi sifake umasipala ezinkantolo ukuze abantu bahlinzekwe ngesinye sezidingongqangi.”